Ch 2 Mathewu – 2fish
Home / IBhayibheli / IVangeli likaMathewu / Ch 2 Mathewu
2:1 Manje, lapho uJesu esezelwe eBetlehema lakwaJuda, ezinsukwini zika Inkosi uHerodi, bheka, Magi kusukela empumalanga wafika eJerusalema,
2:2 wathi: "Uphi yena owazalelwa eyinkosi yamaJuda? Ngoba sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga, futhi siye simdumise kuye. "
2:3 Manje uHerode inkosi, ngokuzwa lokhu, wakhungatheka, neJerusalema lonke kanye naye.
2:4 Futhi lapho isibuthele ndawonye bonke abaholi zabapristi, kanye nababhali besizwe, waxoxa nabo kuphi kwakuyoba uKristu uzakuzalelwaphi.
2:5 Bathi kuye: "EBhetlehema laseJudiya. Ngokuba ngokwenze njalo liye kulotshiwe ngokunjalo ngumprofethi ukuthi:
2:6 'Nawe, Bethlehem, ezweni lakwaJuda, kukhona neze okungenani phakathi abaholi bakwaJuda. Elivela kini bayakuphuma umbusi ngubani ziqondise abantu bami u-Israyeli. ' "
2:7 Khona-ke uHerode, buthule ebiza izazi, ngenkuthalo wafunda kuzo isikhathi inkanyezi ebonakele ngaso, lapho kubo.
2:8 Futhi ukubathuma eBhetlehema, uthe: "Hambani ngenkuthalo ubuze imibuzo mayelana umfana. Futhi uma usuthole naye, ukuyobikela kimi, ukuze mina, too, angase afike futhi simdumise kuye. "
2:9 Futhi lapho Seziyizwile inkosi, bahamba. Futhi bheka, inkanyezi ababeyibone ayebone empumalanga waya phambi kwabo, kuze kuhlwe, ifika, Wama ngenhla maqondana nendawo lapho umntwana ekhona.
2:10 Khona, Lapho bebona inkanyezi, beshaywa kuyithokozisa ngumuntu ngokuthokoza okukhulu kakhulu.
2:11 Futhi bangene emzini kagogo, bafica umfana noMariya unina. Manje, phansi falling, akhuleka kuye. Futhi zavula amagugu azo, zamkhunga ngezipho: igolide, nenhlaka, nenhlaka.
2:12 Esamukele impendulo ubuthongo ukuthi akufanele ukuba bangabuyeli kuHerode, baphindela ngenye indlela eya esifundeni yabo siqu.
2:13 Ngemva kokuba sezihambile, bheka, ingelosi yeNkosi yabonakala e ubuthongo Joseph, wathi: "Vuka, futhi amthathe umfana kunina, ubalekele eGibhithe. Futhi ahlale khona ngize ngikutshele. Ngoba kuzokwenzeka ukuthi uHerode bayofuna umfana ukumbulala. "
2:14 Futhi evuka, wathatha umfana nonina ebusuku, wasuka waya eGibhithe.
2:15 Futhi waqhubeka ehlala lapho, kwaze kwaba yikufa kukaHerodi, ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa yiNkosi ngomprofethi, wathi: "Ukuba iphume eGibhithe, Ngayibiza indodana yami. "
2:16 Khona-ke uHerode, ebona ukuthi wayekade yileyo izazi, wathukuthelela nokuthukuthelela. Futhi ngakho wathumela ukubulala bonke abafana abangenayo eBhetlehema, futhi kuzo zonke kwemingcele yayo, kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili ubudala nangaphansi, ngokwesikhathi ukuthi wayefundisiwe by ngemibuzo izazi.
2:17 Khona-ke lokho okwakhulunywa ngomprofethi uJeremiya kwagcwaliseka, wathi:
2:18 "Izwi okuzwakele eRama, ngokukhala okukhulu nokulila: Rachel okhalela namadodana akhe. Futhi yena akathandanga ukuba waduduza, ngoba bebengebona more. "
2:19 Khona, lapho uHerode ushonile, bheka, ingelosi yeNkosi yabonakala e ubuthongo kuJosefa eGibithe,
2:20 wathi: "Vuka, futhi amthathe umfana kunina, niye ezweni lakwa-Israyeli. Ngoba labo ababefuna impilo yomfana zidlulile. "
2:21 Wasukuma, wathatha umfana nonina, wangena ezweni lakwa-Israyeli.
2:22 Khona, kokuzwa ukuthi Arkelawu wavele waba ngukumkani eJudiya esikhundleni sikaHerode uyise, wesaba ukuya khona. Futhi eseyaliwe ebuthongweni, wasuka waya ezingxenyeni LwaseGalile.
2:23 Futhi ifika, wahlala emzini okuthiwa iNazaretha, ukuze kugcwaliseke lokho okwakhulunywa ngabaprofethi: "Ngoba lowo uyakuthiwa umNazaretha."